Fursadaha ganacsi iyo dhaqaale ee Soomaaliya - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Fursadaha ganacsi iyo dhaqaale ee Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Abriil, 2013, 03:53 GMT 06:53 SGA
Magaaladatan London waxaa isugu yimid dad Soomaali iyo ajaanib isugu jiray oo ka qeybgalay barnaamij ay soo qabanqaabisay Hey'ad Soomaaliyeed oo la yiraahdo Somali Economic Forum.
Qaar ka mid ah dadka ka soo qeybgalay barnaamijka Somali economic forum
Magaaladatan London waxaa xalay isugu yimid dad Soomaali iyo ajaanib isugu jiray oo ka qeybgalay barnaamij ay soo qabanqaabisay Hey'ad Soomaaliyeed oo la yiraahdo Somali Economic Forum.
Dadkaasi ayaa isugu jiray dhaqaale-yahanno, ganacsato, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale oo ka hadlayay fursadaha ganacsi iyo dhaqaale ee dadka Soomaalida gudaha iyo dibeddaba.
Haddaba munaasabaddaasi waxaa ka qeybgalay Farxaan Maxamed Jimcaale oo ka wareystay ujeedada shirka Xasan Muuse Dude, oo madax ka ah hey'addaasi dhinaca dhaqaalaha ee soo qabanqaabisay kulanka ee Somali Economic Forum.
Safaf ayaa loo galay daawashada Mandela